Guusha Kismaayo & Isku aadka afar dhammaadka tartan aqooneedka | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Guusha Kismaayo & Isku aadka afar dhammaadka tartan aqooneedka
Guusha Kismaayo & Isku aadka afar dhammaadka tartan aqooneedka
Muqdisho (SNTV)-Waxaa wareegga ugu dambeeyo ee dhammaadka wareegii 3-aad caawa ku wada tartamay degmooyinka Kismaayo & Xamar-jajab oo ka kala tirsan Jubbada-Hoose iyo Benaadir.
Tartameyaasha Degmada Xamar-Jajab ee Gobolka Banaadir waxaa la weydiiyey 7-Su’aal, todobadii su’aal ee la weydiiyay waxa ay ka jawaabeen labo su’aal, mana jirin wax ka faa’iideysi ah oo ay heleen. wadarta guud ee dhibcaha tartameyaasha Degmada Xamar Jajab ay heleen waxay noqotay 4- dhibcood.
Tartamayaasha Degmada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose waxaa dhankooda la weydiiyay 7-su’aal, waxa ay ka jawaabeen saddex su’aal, waxa ay ka faa’iideysteen labo su’al oo soo hareer martay tartamayaasha Degmada Xamar Jajab, wadarta guud ee dhibcaha ay heleen tartameyaasha Degmada Kismaayo waxay noqotay10-dhibcood.
Tartamayaasha Degmada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa caawa u soo gudbay wareegga afaraad ee tartanka oo ah wareegga ugu dambeeyay ee sideed dhamadka, halka tartamayaasha Degamda Xamar Jajab ay noqotay degmadii ugu dambeysay ee loo diiwaan geliyo in ay ku hartay dhammaadka wareegga 3-aad.
Intaas kedib ayaa guddiga tartan aqooneedka bisha ramadan waxa ay go’aamiyeen in habeen dambe wareegga 4-dhammad ay wada tartami doonaan demooyinka Hodan & Warta Nabadda oo ka wada tirsan Gobolka Banaadir, halka isla habeen dambe qeybta dambe ay wada ballansanyihiin Kismaayo & Shibis oo ka kala tirsan Gobollada Jubbada Hoose iyo Banaadir.
Maamulka Gobalka Benaadir ayaa sanad kasta taaba geliyo tartanka, waxaana tabintiisa iska leh warbaahinta qaranka tartan aqooneedka Bisha Ramadan.
Previous articleCiidanka Booliska Soomaaliya oo maanta Qalab Ciidan lagu wareejiyey
Next articleEng. Yarisow oo Boggaadiyey Dardarta ay ku socdaan howllaha Doorashooyinka 2020.